Ups na Downs Of Ọbịa ịde blọgụ - Mara Otu O Si Nyere Gị Aka ... | Okporo ụzọ ka Mgbakwunye
Mee SEO, ahia ahia, nyocha nke ndi ozo,
PPC na mgbasa ozi mgbasa ozi na-elekọta mmadụ site na otu ikpo okwu.
by Beverly Obere on June 14, 2021
Ups Na Downs nke Ọbịa ịde blọgụ - Mara ka o si enyere gi aka idobe okporo ụzọ
O doro anya na ide bụ ọrụ. Nke a nwere ezi uche yana n'otu oge ahụ bara uru n'ezie mgbe ị na-agba ọsọ na ntanetị dịka ọrụ gị. Nke abuo, ị nwere ike ime ederede blọgụ ndị ọbịa maka ọbụlagodi okporo ụzọ weebụ.
Mgbe ị gara na ntanetị, ị naghị ahụ ihe nkiri kọmputa ma ọ bụ eserese n'ime ya. Ọ bụ nke na-akpọsa mgbasa ozi weebụ na saịtị ahụ. Na nkenke, ebe nrụọrụ weebụ anaghị adọrọ mmasị.
Ndụmọdụ nke Akwụkwọ nchịkọta akwụkwọ
E wezụga kpọbata uru iji chọpụta ihe na gị onwe gị na internet saịtị, ị nwere ike N'otu aka ahụ kwụsị ọbụna karịa okporo ụzọ weebụsaịtị site ụzọ nke esenowo blog ide. Nweta njikọ weebụ site na ebe nrụọrụ weebụ ndị ọzọ dị iche iche na-enweghị itinye ego ọ bụla.
A tụlere Appfọdụ Nghọta
Ọ dị mma, yabụ na nke a nwere ike ịdị ka ihe na-atọ ụtọ yana ezigbo mma. Onweghi isi okwu ma obu okwu ndi ozo banyere?
N'ihi na ị na-eme ederede blọgụ ọbịa nke na-egosi na ị na-ebugote ngwa gị na ụdị netwọkụ mmekọrịta ọ bụla yana kwa maka onye ọ bụla iru nyocha yana ịhụ, ịkwesịrị ijide n'aka na ị ga-anọ n'ụdị kachasị mma gị mgbe ị na-eke. N'ihi gịnị? N'ihi na eziokwu na ị ga-dị nnọọ kwadebe nakwa mgbe na-eziga ndị kasị ahụkebe nke gị owuwu, ọ bụ!
Nke a bụ ụzọ ị zụrụ ahịa yana ịnye ndị ọrụ ntanetị ahụ na-enweghị oge iji mepụta iji nweta azịza gị. Yabụ, ị kwesịrị ịrafu ha ma kpughee ha ihe ị nwere. Ndị isi gị kwesịrị ịdị na-adọrọ mmasị ma nwekwaa ọtụtụ ọdịiche.
Enwere ike ikwu okwu gabigara ókè banyere isiokwu gị nke ka mma karịa na-eche nke ahụ. Enwere ike ịnwe ndị edemede blog dị iche iche na-eme ihe ọjọọ na gị site na ịmezigharị ozi gị ntakịrị, wepu njikọ weebụ gị, ma mesịa bulite ha na akụ ndị ọzọ. Nke ahụ na-egosi na ebe nrụọrụ weebụ gị na-enweta ọtụtụ okporo ụzọ weebụsaịtị.
Fọdụ ga-azọrọ na ndị ọbịa blog ide bụ echiche kachasị mma akọwapụtara maka usoro njikọ njikọ weebụ. Fọdụ ga-agbagha aro a. Yabụ iji mee ka o doo anya, ịkwesịrị ịme atụmatụ maka ndagide ahụ ma ị nwere ike ịme ihe kachasị mma mgbe niile iji rite uru n'ọrụ a.
GỤRỤ AHỤ Ezubere Ngwaahịa Ngwaọrụ Gị Mmemme Mgbakwunye Mgbakwunye
Ebumnuche gị bụ ebe a bụ ịkwado okporo ụzọ weebụ. Ihe dị mkpa, ị ga-eji ike gị ide ihe yana bulite ha na ụdị niile elekọta mmadụ media ime njikọ azụ.
Ide ederede bụ ọrụ aka. Nke abuo, ị nwere ike ime ederede blọgụ ndị ọbịa maka ọbụlagodi okporo ụzọ weebụ. Ọ bụ nke na-akpọsa mgbasa ozi weebụ na saịtị ahụ. Ewezuga inye onyinye iji nyochaa ihe ndị dị na saịtị gị, ị nwekwara ike ịtụle ọbụna ntanetị weebụ site na ụzọ nke ịde blọgụ ndị ọbịa. Nke ahụ na-egosi na saịtị gị na-enweta obere okporo ụzọ weebụsaịtị.